Oo jidadkayga oo dhanna si ay u gudbiyaan mp3 si iPhone daaqado / Mac
Waxay yihiin barnaamijyadooda badan oo bixiya fursado ah MP3 files ka mid qalab Apple wareejinta in kale. Waxaad ku abuuray laga yaabaa mp3 maktabadda si aad u hesho arrin mararka qaar in maal aad u badan oo aan laga yaabaa in aad rabto in aad iyaga lumin. Maxaad samayn kartaa waa wareejiyo MP3 in aad iPhone ka Mac ama Windows. Habka ugu badan ee aan loo isticmaalaa in lagu isticmaalayo Lugood si ay u noqon karaan awood uusan noqonin maktabadda warbaahinta our. I rumaysta aad; waxaad weli u transferMP3 karo files daaqadaha ama Mac si iPhone leh ama aan lahayn Lugood aad. Kulankan waxa Waxaan tusi doonaa waxaad si ay u gudbiyaan MP3 aan la isticmaalayo Lugood iyo isticmaalka Lugood.
Sidee si ay u gudbiyaan Mp3 Si iPhone Iyadoo Lugood (Windows)
Sidee si ay u gudbiyaan Mp3 Si iPhone Iyadoo Lugood (Mac)
Sidee si ay u gudbiyaan Mp3 Si iPhone aan
Top 5 goobood oo kala soo bixi mp3
Haddii aad isticmaalayso daaqadaha ka hawlgala nidaamka, kala soo bixi Lugood waa la socon nidaamka hawl gal. Markaas si loo hubiyo in aad leedahay cable USB ah.
Tallaabada 1 Connect aad iPhone in computer
Isticmaal aad cable USB iPhone in ay xirmaan kombiyuutarka. Lugood laftiisu furi doonaa in aad kombuutarka. Haddii aanad weligaa isticmaali Lugood aad iPhone icon ah arbushin doonaa amrayo Trust. Tubada waxa ku.
Tallaabada 2 fur aad iPhone kombiyuutarka
Click on your computer iPhone badan oo guji kooban.
Tallaabada 3 nidaameed MP3 in qalab aad
Hadda dooro file MP3 in aad jeclaan lahayd in iyaga leeyihiin aad telefoonka. Waxaad dooran kartaa oo dhan haddii aad rabto ama calamey MP3 faylasha la doonayo. Oo weliba aad u hagaagsan karaan dhammaan playlist, sifayn ama albums. Markaas guji nidaameed . Waxaad gacanta jiidi karaan waxyaabaha MP3 si ay u qalab aad.
On aad Mac loo hubiyo in aad Lugood u shaqaynayo. Waxaad u cusbooneysiin karaa haddii aad leedahay version weyn.
Tallaabada 1 Connect aad iPhone in aad Mac
Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in aan isku xirno iPhone in aad Mac waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo cable USB ah.
Tallaabada 2 Dooro iPhone kombiyuutarka
On Lugood suuqa kala click on Qalabka aad ku arki doonaa iPhone badan your computer. Markaas guji Kooban.
Tallaabada 3 Dooro MP3 in loo wareejiyo
Dooro music MP3 in lagu wareejiyay. Hubi in aad calaamadeeyay iyaga oo dhan. Markaas guji nidaameed si ay u gudbiyaan MP3 ah. Xataa waxaad soo jiidi kartaa playlist MP3 si ay u qalab aad.
Sidee si ay u gudbiyaan Mp3 Si iPhone aan Lugood
Tan iyo Lugood ayaa ka liidato sida qaabab audio iyo waafaqid daaqadaha badneed ee aad ku wareejin karaa waxyaabaha aan u isticmaalayo. Sidaa darteed sida aad u gudbin doona MP3 files si aad iPhone? Wondershare TunesGO waa bedel ugu fiican ee Lugood.
Iyadoo TunesGo Wondershare aad uma baahna network daruur si ay u gudbiyaan waxyaabaha u dhexeeya qalabka macruufka iyo your computer. App Tani waa la jaan qaada daaqadaha iyo Mac. Waxa aad u leedahay in la sameeyo waa download maxkamadda lacag la'aan ah ama ka iibsan version la jaan qaada your computer. Haddii aad raadinayso app ah oo aan kaliya ku wareejin doonaa videos, music, xiriirada, farriimo Guda aad, wac laakiin sidoo kale ka dibna sawirro Wondershare TunesGo waa jidka. Sida aad la wadaagto files u dhexeeya qalabka aad ugu tayada iyo asalnimada waxyaabaha aad si fiican u la daryeelo.
Tallaabada 1 Download Wondershare TunesGo
Tag goobta Wondershare iyo soo bixi software ah. Haddii aad isticmaalayso daaqadaha soo bixi Wondershare TunesGo daaqado iyo Wondershare TunesGo u Mac haddii aad isticmaalayso Mac oo aan bilowno on your computer.
Tallaabada 2 lifaaq aad iPhone si aad u computer
Isticmaal iPhone USB cable inay xiri labada qalabka.
Tallaabada 3 Dooro MP3 faylasha
On suuqa kala barnaamijka in aad computer waxaad arki doontaa icon ah ee aad iPhone. Riix Transfer Music> Import, taas click kuu ogolaanaysaa inaad dooro music ka your computer. Dooro MP3 files in aad rabto in lagu wareejiyo.
Tallaabada 4 Bedelka MP3 faylasha
Ka dib markii xulashada faylasha guji Ok iyo files waxaa si otomaatik ah wareejin doonaa iPhone.
Sida aad ku aragteen kor ku app tani waa si dhakhso ah oo lagu kalsoonaan karo. Sidoo kale waxaa jira oo kale software kale Lugood mid ah Wondershare TunesGo kala ah, PodsTrans, CopyTrans iyo SynciOS.
PodTrans waa software free kuu ogolaanaya inaad files ka iDevices aad wareejiyo si aad u computer ka maqan ee Lugood. Waa awood wareejinta Deymaha maqan, videos, music, iyo podcast halka dayactirka ay asalnimada. Software Tani waa la jaan qaada daaqadda iyo X10.6 Mac OS si 10.11.
Haddii aad rabto in aad waafajinta warbaahinta si aad u aad iPad, iPhone iyo iPad ka your computer aan la isticmaalayo Lugood go ee SynciOS. App Tani waxay taageertaa kaliya Windows Vista, XP, 8 iyo 7. Iyadoo app waxa aad sidoo kale dib kartaa maktabadda warbaahinta on your qalabka macruufka la qaadi karo.
Waxa kale oo software free Lugood kale waa CopyTrans daaqado. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad nuqul aad sawiro, playlist, muusig iyo cajallado fiidyow ka iPhone, iPad iyo iPod in PC ah. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara music on app this.
Haddii aadan haysan MP3 qalabka halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 5 goobood oo aad iyaga kala soo bixi kartaa
Halkan waxaad uun u leeyihiin in ay raadiso file MP3 ah iyo nuqul ka URL iyo paste on engine raadinta. Riix oo kala soo bixi shayga.
On this site aad ka heli doontaa ugu baadhay heeso. Waxaad weli raadin kartaa wax aad rabto iyo download it.
Tani website kale hogaanka free kuu oggolaanaysa in aad kala soo bixi MP3 music. Just ku qor magaca song iyo fanaan oo ka muuqan doontaa. Riix si aad u dejisan.
Boggan waa user saaxiibtinimo waxaad ka raadin kartaa music MP3 ah haddii aan la soo bandhigay ee baadi goobka ugu dambeeyay. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa album dhan muusikiiste aad ugu jeceshahay.
waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa MP3 music ka website-kan. Waxay leedahay ugu sareeya gooldhalinta ka labaatan ku dhow guud ahaan adduunka. Waxaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalada archives, mp3 iyo daboolida
Top Video Toban 8mm Apps u iPhone iyo Android casriga ah
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan mp3 si iPhone daaqado / Mac